UMPROFETHI U-ELIAS: IBIOGRAFI, IMISHINI, KUNYE NOKUNYE OKUNINZI
El umprofeti uEliya; Uyamenywa ukuba ufunde ngeziganeko ezohlukeneyo ezingqonge ubomi bale ndoda inzima ivela kwizibhalo ezingcwele.
1 Umprofeti uEliya
1.2 Umsebenzi wokuqala
1.3 Umsebenzi wesibini
2.1 UEliya ngokwesiko lamaJuda kunye nelamaKristu
U-Eliya uyavela kwizibhalo ezingcwele, njengomprofeti ongumHebhere owayephila ngenkulungwane ye-XNUMX BC, igama lakhe livela kwigama lesiHebhere elithi Ēliyahū (אליהו) eliguqulela “UThixo wam nguYahveh”.
Ubomi besiprofetho bukaEliya buqala ngexesha lokulawula kuka-Ahabhi, unyana kaOmri, owayongamele uBukumkani bakwaSirayeli phakathi konyaka wama-874 BC nowama-853 BC
Ubomi bakhe bachitha ngemihla ka-Ahabhi noIzebhele, kwaye wayenza inkonzo yakhe ngezizathu zonqulo nezokuziphatha. Kangangexesha elide wakwazi ukwahlula uSirayeli kunqulo lukaBhahali, nangona kunjalo, ingqumbo kaIzebhele yamkhokelela ekubeni ashiye loo mmandla, enika uElisha ukuba aqhubeke nomsebenzi wakhe.
Igama elichaza isimelabizo umprofeti uEliya Kuvela emlilweni, kubonisa ngokugqibeleleyo isimilo sikaEliya njengomntu okhethekileyo othunyelwe evela kuThixo, ukuze abuyisele ukholo lwabantu abangamaHebhere kwiimeko ezinobutshaba.
Bathi ababhali beencwadi zeeKumkani, owona mthombo uphambili wamabali abo babesekwe komnye umbhalo olahlekileyo ngoku, owaziwa njengeNcwadi yeziKronike zooKumkani bakwaSirayeli.
Kusenokwenzeka ukuba kulo mthombo, amabali angquzulwano phakathi kukaEliya noKumkani uAhabhi azelwe:
"Ngubani owanikela ngamehlo amabi kuThixo uNdikhoyo, ngaphezu kwabo bonke ababemandulele?" Wathabatha umfazi wakhe umKanan, uIzebhele, intombi ka-Itobaal, ukumkani waseSidon owashiya uBhahali noAshera, bemkhonza bequbuda kuye. phambi kwakhe ".
Ibali liya kuthi uKumkani uAhabhi waseka inkolo entsha eziswe ngumfazi wakhe uIzebhele, eyakhokelela ekuphelisweni kwabaprofeti abaninzi benkolo. Emva koko uYahveh ubangela imbalela enkulu ukuba ifikelele kummandla okhatshwa yindlala.
Ubukho be Umprofeti uEliya Kubonakala kumangalisa kwiingxelo, elumkisa uKumkani uAhabhi ngembalela eveliswe kwaye yathunyelwa nguYahveh.
Emva koko ufihla ngaphakathi kwindawo yokusabela kufutshane neJordani, apho amahlungulu amnika ukutya, kamva ngokomyalelo kaJahveh, uya eSarepta, idolophu eyayikufutshane nekhaya lomhlolokazi, kule ndawo umprofeti inesisa sokwandisa ukutya.
Kwangokunjalo, phakathi kwemisebenzi, uvusa unyana wakhe, uEliya ucela umngeni kuIzebhele, owayekhe wayalela ukuba babulale abaprofeti bakaYahveh.
Kungangqinwa yimibhalo yesiHebhere kwincwadi yooKumkani 18, 20-40, ukuba uEliya ujongene nababingeleli bakaBhahali kwimbambano, eyayimalunga nokucela oothixo babo ukuba banikele umlilo kwizinkuni apho kwafelwa khona umntu. inkomo.
Umceli mngeni yayikukuba uThixo okwazile ukubasa umlilo wayengoyena mntu unyanisekileyo, uBhahali wayengenakufumana ukubingelelwa kwabo babemlandela, ngelixesha uthixo u-Yahveh wathumela amadangatye omlilo evela ezulwini, awatshisa isibingelelo sika-Eliya ngomlilo. ukuyishiya isongelwe ngothuthu, nangona yayihlanjwe ngamanzi afanelekileyo.
Ngokukhawuleza, abancedisi baqhubeka nemiyalelo evela kuEliya yokuba kubulawe abalandeli bakaBhahali abangama-450, kulapho u-Yahveh athatha isigqibo sokuthumela imvula enkulu, emva kokuba ehlupheke ngembalela.
Ukuba uyifumene le posi inomdla, siyakumema ukuba ufunde inqaku lethu ku: Moisés.
Ubutshaba obenzeka phakathi kuka-Ahabhi noIzebhele noEliya, abuzange bucuthe inkcubeko, kodwa babelungiselela ukususa abemi bayo. Njengoko kubonakala kuKumkani 21, isiganeko sesidiliya sikaNabot, sabonisa imbali ephindiweyo yokuhluthwa kwemihlaba kubalimi ziinkokheli nabanye abanini bezityebi; nangona kunjalo, ezi ziganeko kubhekiswa kuzo kuIsaya, kuMika 2: 2.
El umprofeti uEliya uphumeza isohlwayo esigqibeleleyo esithumelayo ukufa kuIzebhele nakwinzala yakhe noAbhabhi. Ukuxakaniseka phambi kwengxabano nomkhosi wokumkani wase-Aram, nangona iingqikelelo ezilungileyo zabaprofeti ukuze kuzuze uIzebhele, unyana wakhe uAhaziya, owayeneengcinga ezifanayo nezabazali bakhe ngokweenguqulelo ezibhalwe kwizibhalo ezingcwele, ulawulo olufutshane kunye nokufa ngaphambi kwexesha, kungashiyi nzala.
Kungangqinwa kuKumkani 2: 1-13 ukuba emva kokufa kuka-Ahaziya, ngo-852 BC, u-Yahveh waphazamisa isikhundla somprofeti uElisha, ngenqwelo enamahashe omlilo awamhlulahlula aba ziziqwenga ezibini, ngelixa u-Eliya wenyukela ezulwini ngaphakathi Isivunguvungu, oku kuxelwe kuKumkani 2:11.
Njengoko kungqinwa kwizibhalo ezingcwele kuYakobi 5:17, uEliya wayengumntu oneempawu ezifana nezakhe nawuphina umntu, kodwa emva koloyiso, uyabaleka esoyika impindezelo eyayinokuthathwa nguIzebhele, kwaye walungiselela entlango efuna ukufa.
Kodwa, yakuba ingelosi kaYehova imnike ukuba asele adle, waziva evuya kakhulu emoyeni wakhe owamkhokelela ukuba aye kwiNtaba yeHorebhe, indawo azifihle kuyo emqolombeni.
Ngelixa efihle emqolombeni, uhlaselwa ludandatheko olunamandla, emva koko umprofeti uEliya Ubongoza uYahveh kwaye umbonisa ukuba unekhwele elomeleleyo kwimishini yakhe ayiphathisiweyo, kuxa uThixo ezenza abekhona kwaye emnceda ukuba adanduluke ngelizwi elizolileyo nelithambileyo elivakala emva komoya, ukungcangcazela okunamandla kunye namadangatye, amnike imisebenzi emitsha kunye nokugqiba ukwabela uEliseo njengelandela lakhe.
UEliya ngokwesiko lamaJuda kunye nelamaKristu
El umprofeti uEliya ngokwesiko lamaJuda, kulindeleke ngakumbi kwimibhiyozo yePasika eyayisenzeka kumakhaya ama-Israyeli, awayenikwe indawo eyodwa etafileni.
Njengoko kubonakala kwiNcwadi kaMalaki, ukuba uEliya uza kubuya ngomhla womgwebo wokugqibela, umqondiso omnika umqondiso kaMesiya, emnika ukubaluleka okukhulu kwimfundiso yamaJuda.
Abantu abaninzi abakholwayo babenenkolelo yokuba uYohane uMbhaptizi yayinguEliya ngokwakhe owafika wazokulungisa indlela yakhe, oko kungangqinwa kwizibhalo ezingcwele ezikuMateyu 11: 7-15, Malaki 4.5.
Kukhulu kangangokuba, ukunika amandla kolu thumo, uYohane uMbhaptizi wayenxibe ingubo efanayo naleyo yayisetyenziswa nguEliya, ngamabali avela kuKumkani 1: 8 nakwiiKumkani 2: 1-13.
Into ethile ebonakalayo kwiincwadi zeVangeli ezichazayo, kwivesi yoTshintsho, uEliya noMoses babonakala bethetha noYesu, kubonakala kuMarko 9: 4.
I-Apocalypse ecingelwa ngo-Eliya, imenza umntu kunye no-Enoki elwa nonyana wobubi owababulalayo, emva kwesi siganeko, banesipho sokuvusa, ngendlela efanayo eyenzekayo namangqina amabini eSityhilelo 11 emfazweni notshaba.